Dambiyada waawayn ee ka dhaca Tansaaniya oo hoos u sii dhacaya - Sabahionline.com
Dambiyada waawayn ee ka dhaca Tansaaniya oo hoos u sii dhacaya
Maajo 15, 2012
Heerka dambiyada culculus ee ka dhaca Tansaaniya ayaa sameeyay hoos u dhac 19% ah marka la barbar-dhigo labadadii sano ee la soo dhaafay taasoo loo tirinayo dadaal dheeraad ah oo ay la yimaadeen bilaysku, sidaana waxa Isniintii (14-ka May) Darusalaam ka sheegay Isbatooraha Guud ee Bilayska Said Mwema.
Ururka saxafiyiinta Tansaaniya oo baaraya weerarkii Kibanda
Mas'uuliyiinta Tansaaniya oo xiray 9 burcad ah
Tansaaniya. Musambiig, iyo Koofur Afrika oo saxiixday heshiis amni
“Inkasta oo ay jiraan caqabado haysta gobolka, haddana sida ku cad warbixinta sannaka 2010-ka illaa 2011-ka, dambiyada la xiriira argagixisada, burcad-badeednimada, daabulka dadka iyo dambiyo kale oo arrimahaa la xiriira ayaa si fiican wax looga qabtay,” ayuu yiri Mwema, sida uu sheegay wargayska Daily News ee ka soo baxa Tansaaniya.
Mwema ayaa u tiriyay hoos-u-dhaca dambiyada istiraatijiyadda ay ciidanka bilasku kula diriraan dambiyada xuduudadaha ka soo tallaaba. Waxa uu sidoo kale sheegay in ciidanka Tansaaniya ay iska kaashadeen dhiggooda Koonfurta Afrika si ay u baaraan dambiyada ka dhaca gobolka.
Daabulka dadka iyo burcad-badeednimada ayaa wali ah dhibaatooyinka ugu waawayn. Mwema waxa uu sheegay in la diiwaan-galiyay qiyaasta 144 xaaladood oo la xiriirta daabulka dadka, marka la barbar dhigo sannadkii 2011-kii oo la diiwaan-galiyay 124 xaaladood.
Al-Shabaab iyo al-Qaacida ayaa sidoo kale khatar ku haya gobolka, ayuu Mwema ka sheegay kulan ay yeesheen Ururka Iskaashiga Taliyayaasha Bilayska Gobolka Koonfurta Afrkia. Muxuu kula yahay qoraalkan?